Farmaajo iyo Madoobe, oo isu hor fadhiya arrintii Gobolka Gedo oo aan weli xal laga gaarin - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Farmaajo iyo Madoobe, oo isu hor fadhiya arrintii Gobolka Gedo oo aan weli xal laga gaarin
Farmaajo iyo Madoobe, oo isu hor fadhiya arrintii Gobolka Gedo oo aan weli xal laga gaarin
Madaxweyne Farmaajo iyo Axmad Madoobe, ayaa weli ka arrinsanaya wixii laga yeeli lahaa ciidamada dawladda ee ku sugan Gobolka Gedo oo hore ay Jubbaland usoo jeedisay in gabi ahaanba ciidamadaas laga soo saaro gobolka.
Arrintan oo ka mid ahayd shuruudihii ugu adkaa ee caqabadaha ku noqday shirkii madaxda maamul goboleeddada iyo dawladda Federaalka ah, ayaa lasheegay in markii hore uu aqbalay madaxweyne Farmaajo hase ahaatee ilaa hadda lama oga sababta laysu hor fadhiyo ee aan arrintaas loo meel marin.
Madaxweyne Axmad Madoobe oo muddo bil ah ku sugan Muqdisho, ayaa sheegay in arrinta gobolka Gedo oo keliya uu u jooga. Waxaan wararku sheegayaan in shir gaar ah oo labada madaxweyne ay uga hadlayaan mawduucaasa ay ku yeelanayaan Villa Soomaaliya.
Kulan uu madaxweynaha dawladda Federaalka ah isugu yeeray madaxda maamullada, ayaa maalintii shalay ee Talaadada dib uga furmay magaalada Muqdisho, welise lama xaqiijin arrimaha looga hadlayo shirkan markale u furmay dhinacyada ka qayb galay shirkii arrimaha doorashooyinka dalka.
DF oo laba maalin kaddib ka hadashay weerarkii Cadan